ILakefront eLake Cornelia
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAndrew And Katie
Yiza uhlale kule khabhathi isanda kulungiswa engaphambili kwechibi kwiLake Cornelia. Kukho amagumbi okulala ama-3 kunye nendawo eninzi yomgangatho womoya owongezelelweyo woomatrasi. Kukho igumbi elikhulu lexesha eli-3 ngaphambili kwendlu kunye neyadi enkulu, idokhi kunye nedesika yangaphandle onokuthi uyisebenzise. I-WiFi ibonelelwe kwaye kukho iiTV ezimbini ze-Smart onokuthi uzisebenzise. Sinikezela ngokufikelela kwi-YoutubeTV kwaye wamkelekile ukuba usebenzise ezinye iinkonzo zostrimisho. Uya kuba nokufikelela kwigumbi elincinci lokuhlamba impahla kunye negaraji.
Kukho igaraji yeemoto ezimbini onokuthi uyisebenzise kunye nendawo yokupaka eyongezelelweyo kwi-driveway.
ILake Cornelia lichibi elikhulu lokuzonwabisa kumantla e-Iowa. Ichibi lihle kakhulu kwityhubhu, ukutyibiliza, ukuloba, okanye ukulahla iankile kwaye uzipholele nabahlobo. Kukho ukufikelela echibini loluntu kunye nerempu yesikhephe engaphantsi kwe-1 yeemayile ukusuka kwikhabhini. Ungasigcina isikhephe sakho sibotshelelwe kwidokhi ngobusuku okanye, ukuba uyathanda, kukho indawo yokupaka isikhephe kawonke-wonke kumanzi azolileyo ngaphesheya kwechibi.
Kukho umkhondo weemayile ezi-2.6 ojikeleza echibini olungele ukuhamba ekuseni, ukubaleka okanye ukukhwela ibhayisekile.
Igalufa: IClarmond yikhosi enkulu yemingxuma eli-9 emalunga nekhilomitha enye kuphela ukusuka kule ndawo kwimpuma yechibi.
Iivenkile ezithengisa ukutya kunye nezikhululo zerhasi zibekwe kumgama oziikhilomitha ezi-5 kwiidolophu ezingabamelwane zaseClarion okanye eBelmond.
Umbuki zindwendwe ngu- Andrew And Katie
Sihlala malunga nemizuzu emi-5 ukusuka kule ndlu ngoko ke sifikeleleka kakhulu ukuba kukho nantoni na evela ngexesha lokuhlala kwakho. Siza kudibana nawe kwaye sikuvumele ungene endlwini okanye sikushiyele isitshixo ukuba uyafuna.